Real Gaming - Page 57 of 61 - Just another WordPress site
အဖော်အချွတ် ဝတ်ဆင်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် အလှကုန် ပစ္စည်းများ ရောင်းသည့် အမျိုးသမီး ထောင်ချခံရ
အဖော်အချွတ် ဝတ်ဆင်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် အလှကုန် ပစ္စည်းများ ရောင်းသည့် အမျိုးသမီး ထောင်ချခံရ ကမ္ဘောဒီးယား အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို သောကြာနေ့ကပဲ ထောင်ခြောက်လ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ် ။ အကြောင်းကတော့ အဝတ်အစားတွေနဲ့ အလှကုန် ပစ္စည်းတွေကို ကြော်ငြာ ရောင်းချတဲ့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် လိုက်ဖ် ဗီဒီယိုထဲမှာ ညစ်ညမ်းပုံ သဘောသက်ရောက်တဲ့ တိုလွန်း ဖော်လွန်းတဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင် ထားလို့ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး အုပ်စုတွေက ပြောကြားပါတယ် ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာ တချို့အွန်လိုင်းဈေးသည် တွေဟာ အတိုအပြတ်တွေ ဝတ်ဆင်ခြင်း အားဖြင့်် လိင်ပိုင်း မှုခင်းတွေကိုလည်း အားပေးရာ ရောက်သလို …
” ရောင်ပြန် ” ( အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ…. )
အရမ်းဖတ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေး စာလေးပါ…. ” ရောင်ပြန် ” ( ၁ ) တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ chattingမှာ ခင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းခဲ့တယ်။ အဲဒီကောင်မလေးကို သူ မမြင်ဖူးသေးတော့ အရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး ဖြစ်မှာ စိုးတာနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့ပြီး ၁၀မိနစ် အကြာမှာ သူ့ဟမ်းဖုန်းကို ဆက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်။ ဒါမှ သူ လစ်ထွက်လို့ အဆင်ပြေမယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာ ရောက်တော့ ကောင်မလေး ချောချော ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းမမြည်ပါစေနဲ့လို့ သူကျိတ်ပြီး ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းက …